IVilla Vezzosa D yindawo epholileyo neyamkelekileyo eyinxalenye yendlu yakudala yelizwe.
Uya kuba malunga ne-4.5 km ukusuka kwidolophu yakudala yaseCiterna, apho uya kufumana iivenkile kunye nokumisa ibhasi yasekhaya.
IVilla Vezzosa D yindawo epholileyo neyamkelekileyo eyinxalenye yendlu yakudala yelizwe. Ilala abantu ababini. Imalunga nama-35 square metres (375 square feet). Ibonisa indawo yokubhukuda ekwabelwanayo ngayo, ipatio ekwabelwana ngayo, igadi ekwabelwana ngayo, ukufudumeza ubusika kunye nokufikelela kwi-Intanethi ye-WI-FI.
Uyakuba malunga neekhilomitha ezi-4.5 (iikhilomitha ezi-2.8) ukusuka kwidolophana yaseCiterna, apho uya kufumana iivenkile kunye nokumisa ibhasi yasekhaya. Uya kufumana eyona ndawo ikufutshane yokutyela kwi-1 km (malunga neeyadi ezili-1100) kunye nevenkile yokutya kwi-800 yeemitha (iiyadi ezingama-880).
IVilla Vezzosa D ibekwe kumgangatho ophantsi.
Ukuze uhlale eVilla Vezzosa D uya kufuna imoto. Uya kukwazi ukuyimisa ngaphakathi kwesango lokungena.
IVilla Vezzosa D yenye yezindlu zeeholide ezifumaneka kwindawo encinci. Nceda ufumane inkcazo jikelele yekhompleksi engezantsi, kwaye nceda uskrolele ezantsi malunga nenkcazo yeVilla Vezzosa D.
Idama lokuqubha liziimitha ezi-5 (iinyawo eziyi-16) ubukhulu nobude obuziimitha eziyi-12 (iinyawo ezingama-39) ubude, iimitha ezi-1.8 (iinyawo ezi-5.9) ubunzulu. Kushushu. Indawo yedama lokuqubha ixhotyiswe ngetafile, izitulo, iiambrela zelanga, izitulo zomgangatho, amagumbi okuphumla elangeni kunye neeshawari zangaphandle. Ukusuka kwidama lokuqubha uya konwabela umbono omnandi wamaphandle ajikelezileyo kunye nohlaza. Uya kubelana ngedama kunye nezinye iindwendwe ezihlala kwi-complex. Ivulwa ekuqaleni kukaJuni ukuya phakathi kuSeptemba, ukusuka nge-9 kusasa ukuya kwi-8pm.
Uya kukwazi ukufikelela kwigumbi lokuhlamba impahla ukusuka egadini. Apha uya kufumana umatshini wokuhlamba, intsimbi kunye nebhodi yokuayina onawo. Igumbi lokuhlala
Uya kukwazi ukungena kwigumbi lokuhlala ukusuka kwipatio. Isilingi ineempawu zomthi eziveziweyo kunye neethayile zeterraccotta. Apha uya kufumana ibhedi yomtshato (i-160 cm / 62 intshi, ibanzi kunebhedi enkulukazi). Impahla ibandakanya isitulo sengalo. Itafile yokutyela inokuthatha iindwendwe ezine. Kweli gumbi uya kufumana umabonakude wesathelayithi (amajelo asekuhlaleni). Igumbi linefestile enombono wequla lokuqubha.
Uya kukwazi ukungena ekhitshini ukusuka kwigumbi lokuhlala. Ixhotyiswe ngesitofu segesi esitshisa izibane, i-oveni yombane, ifriji enesikhenkcezisi kunye nomenzi wekofu wohlobo lwamaTaliyane. Ikhitshi inefestile enombono wepatio.
Igumbi lokuhlambela lixhotyiswe ngesitya sokuhlamba, indlu yangasese kunye neshawari. Uya kukwazi ukungena kwigumbi lokuhlambela ukusuka ekhitshini.